मधेस संकट : कसरी खोज्ने मिलनविन्दु ? - भिडियो - कान्तिपुर समाचार
चैत्र ६, २०७३-संविधान र संघीय प्रदेशको सीमांकनलाई लिएर तराई–मधेसमा उत्पन्न असन्तुष्टिले डेढ वर्ष पुगिसक्दासम्म तार्किक निष्कर्ष पाउन सकेको छैन । बरू उल्टै त्यसलाई बुझ्ने क्रममा राज्य सञ्चालक मात्रै होइन, आम मनोविज्ञान पनि विभाजित देखिन्छ । मागहरु राख्ने लोकतान्त्रिक अधिकार प्रयोग गर्नु स्वाभाविक भए पनि संविधानलाई कारक देखाउँदै भारतले लगाएको नाकाबन्दी समर्थन गर्नेजस्ता रणनीतिक भूल मधेसवादी नेतृत्वबाट हुन गयो । यसैको पीडा खप्नु परेका कारण मधेस–पहाडबीच एकअर्कालाई बुझ्ने क्रममा असमझदारी पनि देखिए । संविधानबारे तर्क–वितर्कहरु लामै अवधि चल्दै जालान्, तर तत्काललाई न्यूनतम सहमति कायम गरेर संविधान कार्यान्वयन गर्ने मार्गचित्र समात्न ठूला दलहरु, अनि मधेसी मोर्चा नेतृत्वले गर्नुपर्ने के हो ? कान्तिपुरले यिनै विषयमा आधारित भएर राजनीतिशास्त्री प्रा. कृष्ण पोखरेल, मधेस अधिकारकर्मी दीपेन्द्र झा, ठाकुरराम क्याम्पस वीरगन्जकी उपप्राध्यापक डा. सुष्मा तिवारी द्विवेदी, विश्लेषकद्वय झलक सुवेदी र गेजा शर्मा वाग्लेलाई राखेर शुक्रबार राउन्ड टेबल आयोजना गर्‍यो । सुधीर शर्मा र बसन्त बस्नेतले सञ्चालन गरेको उक्त अन्तरक्रियाको भिडियो कान्तिपुर दैनिकको यूट्युब च्यानलमा हेर्न सकिन्छ।
गेजा शर्मा वाग्ले : नेपालका अन्य भूगोल र समुदायमा जस्तै मधेसमा पनि राजनीतिक, आर्थिक सामाजिक समस्या त छन् । राज्य संरचनामा उचित प्रतिनिधित्व भएन भनेर मधेसले उठाएको मुद्दा जायज हो । मधेसी समुदाय वञ्चितीकरणमा पर्दै आएकाले दूरी बढ्दै आएको थियो । नीति–निर्माणमा मधेसको निर्णायक भूमिका भएन भन्ने गुनासो छ । मधेसकेन्द्रित दलहरूलाई किनारा लगाएर ठूला तीन दलले संविधान निर्माण प्रक्रियामा गएपछि दूरी बढ्दै गयो । संविधान जारी भइसकेपछि मधेसमा आन्दोलन र ‘अघोषित नाकाबन्दी’ का कारण पहाडी समुदायको पनि मधेसी समुदायसँग दूरी बढेर गयो । भारतलाई हेर्ने दृष्टि पनि फरक भएर गयो । नाकाबन्दी त्यही किसिमले खुल्यो पनि । मधेसका असन्तुष्टि बाँकी नै थिए, जसलाई सम्बोधन गर्न र टुंगो लगाउन यो सरकारले पनि सकेन । यसका दुईवटा पक्ष छन् । एक, मधेसवादी दल र मधेस अधिकारकर्मीहरूबाट मधेस मुद्दालाई झन् ‘र्‍याडिकलाइज’ गर्न खोजियो । दुुई, ठूला दलहरूले पनि मधेसलाई बुझ्ने मामिलामा अतिवादी दृष्टि राख्ने काम भयो । यसले दूरी घटाउनेभन्दा बढाउन भूमिका खेल्यो । संविधान संशोधनबारे एमाले र प्रतिपक्षीले संसद्मा बहसै गर्न नदिने निषेधको राजनीति गर्न खोजे । मधेसी दलहरूले पनि मेची–काली अभियान लिएर गएको एमालेलाई प्रवेश नै गर्न नदिने निषेधको राजनीति गरे ।
आरसीटीमा फेरि शाक्य ›